अन्तर्वार्ता हामी पति�पत्नी अलग भइसक्यौ� लेखनाथ न्यौपाने, ड्यास माओवादी नेता एकीकृत माओवादीको विभाजनपछि नेकपा�माओवादीले महाधिवेशन तय ग�यो, तर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेन । शायद यही कारण एकबेलाका चर्चित विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपाने केन्द्रीय नेतृत्वको घोषित जिम्मेवारीमा छैनन् । तर, ड्यास माओवादीले उनलाई युवा र विद्यार्थी फा�ट हेर्ने गरी इन्चार्ज तोकेको छ । एकीकृत माओवादीमा रह�दा नेतृत्वको उपेक्षाका कारण केही समय ओझेल परे । त्यसमाथि दोस्रो वैवाहिक जीवन पनि असफल हु�दा उनीबारे केही समय बजार गर्मायो । दोस्री पूर्वपत्नी आस्था ड्यास माओवादीसम्बद्ध अखिल (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय सदस्य हुन् । यो कुराकानीका लागि न्यौपानेले बागबजारस्थित अखिल (क्रान्तिकारी) को कार्यालयमा डाके । अन्तर्वार्ता दिए । र, सकिएर फर्किने बेला उनै पूर्वपत्नी सोही कार्यालयमा उक्लि�दै थिइन् । �यादव देवकोटा
० ड्यास माओवादीको के जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
� अनौपचारिक हिसाबले विद्यार्थी संगठनलाई सहयोग गर्ने भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ । शायद, त्यसैलाई मैले �जिम्मेवारी� भनेर बुझ्नुपर्ला ।
० तपाईंका असन्तुष्टि कायमै छन् ?
� अलिक मूर्त रूपको जिम्मेवारी छैन । शायद, महाधिवेशन आउ�दैछ, त्यसपछि दिने भनेर पो हो कि �
० �पार्टी र क्रान्ति� भनेर त्यत्रो खट्ने मान्छेहरू नया� पार्टीमा आउनुभयो । तर, कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । कतै तपाईंहरू पनि गोलचक्करमा त पर्नुभएन ?
� पुरानो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यहा�को खटाई कसका निम्ति थियो भन्ने कुरा समग्र समाज र कार्यकर्ताले बुझेकै छन् । त्यो खटाई समग्र वर्ग, जनता र मुलुकको मुक्ति एवं समृद्धिका लागि भन्ने प्रमाणित भएन । यद्यपि, उनीहरूले समय खर्चिएका थिए । विहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म कुदेको कुद्यै गर्थे ।
० कसका लागि खटेका रहेछन् त ?
� बाबुरामलाई इमान्दार भन्ने कि बेइमान, थाहा भएन । उहा�ले �चाबी अन्तै रहेछ� भन्नुभयो । शायद उहा� �चाबी� भएतिरै खट्नुभयो होला । �देशका निम्ति जुवा खेले�� भन्नुभयो । शायद, देशलाई दाऊमा राखेर जृुवाकै खालतिर खट्नुभयो होला । जुवा खेल्दा हारिन्छ कि भन्ने डरले बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो । हाम्रो राष्ट्रियता विदेशी बदमास भएर खतरामा परेको हो कि हाम्रा नेताहरू नै बद्मास भएर हो, हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमा हाम्रो सिस्टमको कति बदमासी छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
० गोलचक्करमा परेको कुराचाहि�...?
� हिजो सेकेन्डम्यान भएको मान्छे फस्र्टम्यान भएर काम गर्दा केही तलमाथि हुन्छ नै । यही कारण एउटा गति पक्डिन नसकेको हो । महाधिवेशन गर्ने भनिएको हु�दा त्यसबाट �क्लियरकट� नभएसम्म नेतृत्व, पहलकदमी देख्न गाह्रो हुन्छ । त्यतिबेलासम्म धैर्यता कायम राख्नुपर्छ । भएन भने त्यसपछि टीका�टिप्पणी गर्नुपर्ला ।
० कार्यकर्ताले त महाधिवेशनसम्म कुर्लान्, तर जनताले �यो सा�च्चैको अलग शक्ति हो� भनेर बुझ्नका लागि कहिलेसम्म कुर्ने ?
� दुःखको कुरा के हो भने, माओवादी पार्टी जे उद्देश्यका निम्ति गठन भएको थियो, जेका लागि लड्यौं र जनताको तहबाट बलिदान भयो, त्यसमा चिप्लियौं । मुख्य नेतृत्वमा उनीहरू थिए, उनीहरूका खराबीले यस्तो भयो भनेर मात्र उम्कन सक्दैनौं । हाम्रा दोष के हुन् ? जनतालाई भन्नुपर्छ । त्यो मात्रामा बद्मासी हु�दा नजिकै बसेर पनि थाहा नपाउने हाम्रो काम गर्ने तरिका, सोच्ने र कमिटी चलाउने शैली अनि जनतालाई डेलिभरी गर्ने तरिकाबारे त प्रश्न उठ्यो नि � राजनीतिक पार्टीले जनतालाई दिने पहिलो सेवा भनेको आफू इमानदार भएर हो । नेकपा�माओवादी र यसका शीर्ष नेता इमान्दार हुन्छ कि हु�दैनन्, यसको भविष्य त्यसैमा निहित छ ।
० त्यो सम्भव छ ?
� मैले २०६० सालमा दिल्लीमा जे देखे�, त्यही�बाट बुझेको हु� कि यो नेतृत्वले नेपालको वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । ० के देख्नुभयो त्यहा� ?
� हाम्रा नेताहरू दिल्लीमा बसेर नेपाली जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । दिल्लीका ठूल्ठूला आवासगृहमा मैले हाम्रा नेतृत्व र तिनका परिवारलाई देखे� । तिनीहरूको घेरा, प्रतिघेरा, दैनिकी, जीवनशैली आदि कुरा देखेपछि नै बुझे� कि यिनले भन्ने गरेको �वर्गीय मुक्ति आन्दोलन� बेकारको रहेछ । मैले यो कुरा आ�नो पुस्तकमा पनि लेखे� । त्यही कारण, झन्डै म कारबाहीमा परे� । कारबाहीमा नपरे पनि मैले पाउनुपर्ने उचित भूमिका र जिम्मेवारीबाट मलाई बञ्चित गरियो । विधान र तरिका मिलाएर मेरो भूमिकामा कटौती गरियो ।
० किन त्यसो गरे त ?
� मलाई �यो रवीन्द्र श्रेष्ठको मान्छे हो, ऊबाटै परिचालित छ, उसकै विचार बोल्छ� भन्थे ।
० नजिक हुनुहुन्थ्यो त ?
�पछिल्लो समय पारिवारिक जीवनमा त ती कुरा विघटन हु�दैछन् भने राजनीतिमा त झन् व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुनासोको ठाउ� हुनै सक्दैन । हामीलाई कसैले ललाई�फकाई गरेर हामी आन्दोलनमा लागेका हैनौं । जे देख्यौं, त्यो उद्देश्यप्राप्तिका लागि लागिएको हो ।
० आरोप लाग्ने तहमा रवीन्द्रस�ग जोडिएको सम्बन्धबारे बताउनुस् न �
� उनी ०५३�५४ सालमा पार्टीको काठमाडौं सचिव छ�दा म त्यही कमिटीमा सदस्य थिए� । पछि उनी विद्यार्थी संगठनको फ्रयाक्सन इञ्चार्ज भए, म विद्यार्थी संगठनको उपाध्यक्ष थिए� । युद्धकालमा पार्टीका नेताहरू प्रवासमा पनि खुला रूपमा बोल्न पाउ�दैनथे । म विद्यार्थीको अध्यक्ष भएको र विद्यार्थी हुनुकै सहुलियतस्वरूप खुला रूपमा बोल्न पाउ�थ�े । भारतको चाहे जन्तरमन्तर होस् वा रामलीला मैदानमा ठूला ठूला जनयुद्ध दिवसका कार्यक्रममा पार्टीले मलाई वक्ता बनाएर पठाउ�थ्यो । म त्यहा� जाने सन्दर्भमा रवीन्द्र प्रवास इञ्चार्ज थिए (उनलाई इञ्चार्ज बनाएको त मैले होइन) । उनी रेल स्टेसनमा ओर्लिनेबित्तिकै लिन आइपुग्थे । त्यही हिसाबले छलफल हुन्थ्यो ।
० पछिल्लो भेट कहिले भयो ?
� उनी उताको (एमाले) विद्यार्थी इञ्चार्ज हु�दा हामी स्ववियु निर्वाचनको माहौलमा थियौं । म अखिल (क्रान्तिकारी) को अध्यक्ष । त्यसबेला उनले भने, �तपाईंहरू शहर पस्नुभयो, हामी गाउ� पस्यौं । शहरका ठूला क्याम्पस तपाईंहरूले जित्नुभयो, गाउ�का साना क्याम्पस हामीले जित्यौं ।�
० एकीकृत माओवादीमा छ�दा तपाईंलाई खर्च चलाउन पनि नदिइएकोजस्ता कुरा बाहिर आए । बेखर्ची भएरै पनि असन्तुष्ट बन्नुभयो कि ?
� हाम्रा पूर्वअध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सिकेको कुरा के हो भने, मन परेको कार्यकर्तालाई सिरानीबाट झिकेर पैसा दिने । मन नपरेका कार्यकर्तालाई पैसाको त कुरै छाड्नु्स्, जिम्मा पनि नदिने � उहा�ले गिरिजाबाट त्यो कुरा सिक्नुभयो र त्यही कुराले उहा�हरूलाई सिध्याउ�दैछ । अब मैले खान पाए� कि पाइन� भन्ने कुरा प्रधान विषय भएन । ०५४ सालमा गिर�तार हु�दा मेरो गोजीमा पा�च रूपैया� थियो । त्यसपछि लगातार साढे चार वर्ष जेल बसे� । मस�ग पैसा छैन, खान पाइन, डेराभाडा तिर्न पुगेन भन्ने हीनताबोध कहिल्यै पाल्नुपरेन । किनभने, म जस्तो थिए�, नेताहरू त्यस्तै थिए । मेरा कार्यकर्ता त्यस्तै थिए । हामीलाई माया गर्ने, समर्थन गर्ने वर्ग पनि हामीजस्तै थियो । शान्तिप्रक्रियामा आयौं । संसदमा गयौं । सरकारमा गयौं । र, वर्गविभाजन हामीभित्रै भयो । कोहीले अकूत सम्पत्ति कमाए, लुकाए । कोही ठूला ठूला घरानाका मालिक भए । कोहीले ठूला ठूला मिडिया हाउस खोले । लगानी, गति, आदर्श र चरित्र उस्तै भएका अरु सहयोद्धा अहिले पनि खान नपाएर हि�डेका छन् । विद्यार्थीको अध्यक्ष छोडिसकेपछि साढे एक वर्ष जिम्मेवारीविहीन थिए� । कोहीस�ग भेट भएन । त्यो बेला दराजका किताब बेचेर पेट पाल्ने, डेरा भाडा तिर्ने र दैनिक खर्च चलाउने स्थिति भयो । अहिले पार्टी नया� भएपछि मौखिक आदेशमै भए पनि जिम्मेवारी पाएको छु । त्यो जिम्मेवारीबाट बा�च्नसम्म मुस्किल छैन ।
० कोही खान नपाउने, कोही उद्योगधन्दा चलाउने । यो स्थिति कहा�बाट आयो ?
� मानौं कि, मस�ग गोरखामा थोरै पैत्रिक सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउने भनियो । (बुझाइयो�बुझाइएन त्यो अर्कै कुरा भयो ।) त्यो भन्दा कयौं गुना धेरै सम्पत्ति पार्टीस�ग छ । जसमा, जनताका पसिना, सहिदका रगत मिसिएका छन् । त्यो सम्पत्ति निजी प्रयोजनमा लगाइयो । गोरखाको मेरो पैत्रिक सम्पत्ति बेच्दा मुस्किलले एक लाख पनि आउ�दैन होला । म काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष भएकै नाताले एक करोडको त गाडीमात्रै चढ्छु । महिनामा सवा एक लाखको घर भाडा तिर्छु । गोरखाको मेरो घरमा निहुरिएर जानुपर्छ, दलिनमा टाउको ठोकिएर कतिपल्ट त टुटुल्को नै बसेको छ । गोरखाको एक लाख पर्ने सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर करोडको गाडी, ठुल्ठूला कम्पाउन्डका घर पाइने भएपछि के चाहियो ? आखिर जे कुराको चाहना पनि बा�चुञ्जेललाई न हो �
कम्युनिस्टले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व हु�दैन भने । यो निरश नारामा परिणत भयो । बुर्जुवाहरूले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ भने । र, त्यो सम्पत्तिमाथि दुईतिहाइ ट्याक्स लगाएर व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यकरण गरे । युरोपको अर्थतन्त्र त्यही भएर टिकेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र वृद्धको जिम्मा राज्यको छ । कम्युनिस्टले नजान्दा बुर्जुवाहरू फस्टाए । नेपालका कम्युनिस्टहरू सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता बने । स्वयं ती कम्युनिस्टका नेताचाहि� मध्यमवर्गीय र उच्चमध्यम वर्गीय बने । प्रचण्ड र बाबुरामहरू उच्चमध्यम वर्गका भएपछि तिनले व्यवहारिक नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । सैद्धान्तिक नेतृत्वले मात्रै पुग्दैन । हाम्रो देशमा गणतन्त्र आयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । तर, देश धर्मनिरपेक्ष हु�दा चितवन, मकवानपुर र धादिङका चेपाङहरूले के परिवर्तन पाए ?
० तपाईंहरू शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम वैज्ञानिक हुनुपर्छ, आधुनिक हुनुपर्छ भन्ने धारको अगुवा । तर, अहिले स्कुलका साइनबोर्डमा विदेशी नाम फेर्दै हुनुहुन्छ । यसलाई स्खलन भएको मान्ने कि नमान्ने ?
� विद्धान प्रधानमन्त्री बाबुरामले स्वीकार्नुभयो कि, �केही गर्न सकिएन� भनेर । सत्ता बदल्छु भनेर हि�डेको मान्छे, सत्ता नबदलिकन त्यही सत्तामा गएपछि सत्ताले मान्छेलाई बदल्दोरहेछ । सत्ताको माथि बसेर तलको क्रान्ति गर्छु भन्दा त्यो सत्ताले कम्युनिस्ट नेतालाई अभिजात वर्गमा रूपान्तरित ग�यो । हाम्रो कुराचाहि� राम्रोस�ग बुझिएन । हामीले सबैभन्दा पहिले शिक्षाका ऐन र नियमावलीको कुरा उठायौं । जिरोप्लस टुका नाम नेपाली मौलिकता, नेपाली प्रकृतिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ भन्यौं । संशोधित नियमावलीले नाम देवनागरीमा राख्नुपर्छ भनियो । विदेशी गल्लीका नाम, विदेशी राज्यका नाम र विदेशका कौडीभरका मान्छेका नाममा हाम्रा शिक्षण संस्थाको नाम किन राखियो ? किनभने, नेपाली विद्यार्थी जो, बेरोजगारीको समस्यामा छन्, विदेश जाने इच्छाका छन्, उनीहरूलाई लोभ्याउन । अमेरिकी राज्यको नाम राखेपछि विद्यार्थीलाई भिसा लाग्छ भनेर लोभ्याइन्छ । विदेशी महाजनले पालेका कुकुरका नाममा कलेजको नाम राखेर यसरी विद्यार्थी लोभ्याउन पाइन्न भनेका हौं ।
० जनवादी शिक्षा प्रणाली भनेर तपाईं नै पनि २० वर्षदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर, खोइ त त्यो जनवादी शिक्षा ?
� हामी त निश्चित राजनीतिक दलको विचार बोक्ने विद्यार्थी संगठन न हौं । स्टेक होल्डर त हौं । तर, पार्टीको जनवर्गीय संगठनले समग्र शिक्षाको खाका कोर्ने, कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने कुरा हु�दैन । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणको तहमा हुनुहुपर्छ । हामीले कोरेकै खाकालाई सदर गरिदेऊ भन्न पनि मिल्दैन । १२ कक्षासम्मको शिक्षा सबैलाई समान रूपमा देऊ भन्यौं । उच्चशिक्षामा कुन कुन सेक्टरका लागि कति कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गरेर शिक्षा दिनुपर्छ ।
० आ�ना छोराछोरीलाई विदेशमा हैन, देशमै पढाउनुपर्छ भनेर तपाईंहरूको पुरानो पार्टीका विद्यार्थी अध्यक्ष हिमाल शर्माले आ�ना छोरालाई चीनबाट ल्याए । तर, अरुले फर्काएनन् नि �
�फर्काएको भनी जुन हल्लाबाजी भयो, त्यो उत्तिकै ठूलो नाटक हो । विदेशबाट छोराछोरी फर्काउने विद्यार्थी संगठनको योजना थिएन । फर्काएको भनेर देखाइयो, फेरि उतै पठाइयो । ० प्रचण्डको पार्टीलाई त �क्यास माओवादी� भन्छन् । पैसाको पिरलो नहोला, तर यो ड्यास माओवादीको खर्चचाहि� कसरी चल्छ ?
� योचाहि� बैद्य बालाई एकपल्ट सोध्नुपर्ला । उहा� बसेको गोंगबुको निवासमा म जम्मा एकचोटि गएको छु । त्यसबेला पार्टी नया� बनेको थिएन । त्यसैले समग्र पार्टीको स्थिति के हो भन्ने म जान्दिन� । तर, हिजो पार्टी एकीकृत हु�दा सादा जीवन बिताउने र समर्पित साथीहरूको पंक्ति नया�तिर देखिएको छ । नालीमा मुख हाल्ने कि नहाल्ने कुरा भौतिक रूपमा सम्भव छ कि छैन, विवेकले दिन्छ कि दि�दैन भन्ने कुरा मह�वपूर्ण हुन्छ । म ठान्छु कि नालीमा मुख हाल्ने कुरा भौतिक शक्तिले हैन, विवेकले निर्धारण गर्ने हो । हिजोको जस्तो पार्टी बन्यो र त्यसलाई पारदर्शी बनाउन सकिएन भने यो नया� पार्टी पनि टिक्दैन ।
० दोस्रो विवाह गर्नुभयो । त्यसमा पनि असफल हुनुभयो नि �
� हाम्रा बाबाहेक परिवारमा सबैले दुई�दुईवटा विवाह गरे । म पनि एउटाभन्दा अर्को विवाह चाहन्नथे� । मैले सामान्यभन्दा नेपाली ढिलो (३० वर्ष) विवाह गरे�, समीक्षाजीस�ग । युद्धकालमा उहा�ले सहादत पाउनुभयो । पछि, पार्टीकै सल्लाहमा अर्को विवाह गरे� । तर, त्यो सुखद हुन सकेन । हाम्रो पारिवारिक जीवन अघि जान नसक्ने भएपछि छलफल गरेर सम्बन्धविच्छेद ग�यौं । मैले जे चाहेको थिइन�, जीवनले त्यही भोग्यो ।
० भेटघाट त हुन्छ रे नि �
� छोरो हिजो मंगलबारबाट चार वर्ष लाग्यो, ऊ मस�गै छ । उसलाई आमाको माया नघटोस् भन्नका लागि कुनै पोइन्टसम्म छाड्न जान्छु । फेरि उहा� (पूर्वपत्नी) हाम्रै विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसरी पनि भेट हुने भयो । तर, पतिपत्नीका रूपमा कानुनी रूपमै अलग भइसक्यौ� ।
० भर्खर पार्टी फुटेको बेला प्रकाशले केटी लिएर भागेको कुरा सुन्दा रमाइलो लाग्यो होला हैन ?
� त्यहा� मौलाएको विसंगतिको एउटा प्रकट रूप हो त्यो । प्रकाश जनताको छोरो हुन्थ्यो भने त्यो कुरा ठूलो थिएन । ऊ हेडक्वार्टरको स्टाफ हो । ऊ जन्मिएदेखि केटी लिएर भाग्नुअघिसम्म पनि हेडक्वार्टरकै स्टाफ थियो । हेडक्वार्टरको स्टाफ हु�दाहु�दै केटी लिएर भाग्नु भनेको घराना राजनीतिभित्रको एउटा विकृति हो । गल्ती प्रकाशले ग�यो, त्यसमा पूर्वअध्यक्ष र सीता म्याडमलाई नमुछौं । तर, प्रकाशले जे ग�यो त्यसमा नियन्त्रण नगर्ने कमजोरी हेडक्वार्टरकै हो ।
० तपाईं फेरि विवाह गर्नुहुन्छ त ?
� म निष्कर्षमा पुगेको छैन । ० लेखनाथ न्यौपानेको जुन चार्मिङ हो, त्यो घटेको छ । मान्नुहुन्छ ?
� विद्यार्थीको अध्यक्ष हु�दा जे थिए�, जति चर्चामा थिए�, त्यो अहिले नहुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा, म चाकडी नगर्ने, तर जमाना चाकडीको छ । हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष गौरव कहा� बस्छन्, मलाई थाहा छैन । महासचिव बादललाई कहा� भेटिन्छ, थाहा छैन । अध्यक्ष बस्ने घर ६ महिनाअघि पुगेको हो, थाहा छैन सर्नुभयो कि त्यही� हुनुहुन्छ �
० पहिला त राम्रो �मिडियाफ्रेन्ड� हुनुहुन्थ्यो । आजकल किन मिडियास�ग भाग्नुभएको ?
� पदीय जिम्मेवारीले पनि होला, अलिक टाढाजस्तो देखिएकोमात्र हो । तर, म मिडियास�ग �बायस� छैन ।
० पार्टीका नेताहरूले त मिडियामा लगानी नै गरेका छन् रे नि �
� नेताका सम्पत्तिको भौतिक खोज्नुभयो भने प्रमाण कही� पनि भेटि�दैन । तर, एबिसी टेलिभिजनले एकीकृत माओवादीका नेताले पाधेको कुरालाई पनि �आहा, क्या राम्रो बासना आयो� भनेर प्रशारण गर्छ । म त्यो टेलिभिजनको दर्शक हुनुका नाताले त्यो निष्कर्षमा पुग्छु । �नया� पत्रिका� मा नेतृत्वको धेरै ठूलो लगानी भएको छ, त्यो कुरा खुद मैले देखेको छु । नया� पत्रिकाले पार्टीभित्रकै टिमले पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षलाई जब्बर ढंगले गाली गर्न सकेन रे भन्छन् । त्यही भएर अहिले गाली गर्ने नया� टिम पठाएको हल्ला सुनिन्छ । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम